Apátistvánfalva, Vas County, i-Hungary
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Daniel
Njengoba icashe phakathi kwezihlahla, iVend Guest house ingafinyelelwa kuphela ngomgwaqo owubhuqu. Ezinyaweni ze-Alps le ndawo iphawulwe ngamahlathi e-coniferous anezilwane zasendle, amadlelo aluhlaza, ukukhanya kwelanga okukhazimulayo, umoya ohlanzekile, nezikhungo zempilo.
Indlu itholakala edolobhaneni elincane eduze komngcele we-Austrian-Slovenian. Ukusuka kolunye uhlangothi uzungezwe izihlahla zikaphayini, kolunye idlelo elide eliluhlaza, eligijima lisuka kuvulandi elinemibono efinyelela kude phansi esigodini futhi likhuphukele kumakhelwane oseduze oqhele ngesigamu semayela. Iqhelelene nakho konke ukuxokozela kwedolobha, nokho ihlome ngokugcwele - indawo yokungcebeleka kanokusho endaweni enhle nephelele. Indlu enamakamelo okulala ayi-6 inikeza indawo yokuhlala izivakashi eziyi-14. Ifakwe i-sauna yaseFinnish kanye nobhavu wamanzi abandayo; igumbi lemidlalo, elilinde izihambeli ezinetafula le-pool, ibhola lezinyawo, netafula le-poker (inqwaba yemidlalo yebhodi, i-poker nesethi ye-mah jong); indawo yokugcina impahla ilungiselelwe ithenisi yetafula noma umentshisi wemicibisholo. Futhi amasethi e-badminton, i-croquet ne-pétanque ayatholakala. Ichibi lokubhukuda lokwenziwa, inkundla ye-volleyball yale ndawo, kanye nenkundla yebhola eseduze kwalo kugcwalisa uhlu. Ikhompyutha, i-broadband ukufinyelela ku-inthanethi futhi yahlala. I-TV iqinisekisa ukuthi izindawo zasemakhaya ngeke zisho ukuhlukaniswa nazo.
Le ndlu iyindawo yokungcebeleka eklanywe ngendlela ehlukile (yakhiwe umdwebi wamapulani odumile u-Laszlo Vincze http://www.vinczeandlaszlo.com/works.php?m1=1&m2=4&id=34, kanye nomklami wezangaphakathi u-Renata Roth) etholakala enhliziyweni ye-Őrség . Igama lesifunda libhekise endimeni yendabuko yokugada kwabantu bendawo, ukwengamela imingcele yezwe. Indawo ekhethekile yale ndawo (etholakala emngceleni ophindwe kathathu, ezinyaweni ze-Alps) inikeza izici ezingavamile hhayi kuphela ezimila nezilwane zendawo (ingxube yezitshalo ezihlala ziluhlaza, nezihlala njalo), izimo zezulu (ezishintshana phakathi kwehlobo elinelanga kakhulu nezihlambi. , kanye nobusika obuneqhwa), kodwa nasempilweni yalo yamasiko (ukuba imbiza encibilikayo yezici zesiHungary, isi-Austrian nesiSlovenia).
Indawo ayithuli, mhlawumbe into ejabulisa kakhulu endlini ukuthi umakhelwane wethu oseduze ukude cishe nekhilomitha. Ukuqasha indlu kusho ukuthi unayo ngokwakho futhi ngaleyo ndlela ukuhlala kwakho ngeke kusaba nezindawo zokuhlala. Kunezinto eziningi ongazibona futhi uzithole esifundeni. Ngaphezu kwalokho, i-Austria ne-Slovenia zisendaweni eyibangana nje, futhi ungathola idolobha elihle laseGraz ngemizuzu engu-45 futhi uye eVienna ngamahora angu-2. Kunenqwaba yemisebenzi ongayenza kusukela ekuvakasheleni ama-spa 5-6 aseSlovenia nase-Austrian aseduze, ukugibela amahhashi, ukudlala igalofu, ukushushuluza eqhweni, ukuzingela, njll. Ungacela ulwazi ngalokhu kubanikazi lapho ufika. Lesi sifunda silungele ukuhamba ngebhayisikili nemithambeka ethambile namagquma.
Indlu iphethwe umnakekeli wethu, u-Zoltan, osebe nathi kusukela ngo-2005. Unakekela indlu futhi unakekela izindawo zethu ngaphezu kokunakekela izivakashi. Ngaphezu kwalokho, omunye wabanikazi abane bahlale betholakala ocingweni, 24/7 futhi bayakujabulela ukuphendula noma yimiphi imibuzo noma ukuhlela noma yini edingekayo ngesicelo sakho.
Indlu iphethwe umnakekeli wethu, u-Zoltan, osebe nathi kusukela ngo-2005. Unakekela indlu futhi unakekela izindawo zethu ngaphezu kokunakekela izivakashi. Ngaphezu kwalokho, omunye…
Inombolo yepholisi: EG20004031
Hlola ezinye izinketho ezise- Apátistvánfalva namaphethelo